कसरी एक ब्राजील ब्राजील वाक्सर पत्ता लगाउन
by Anitra ब्राउन
जब तपाइँ ब्राजीलियन मोम प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, व्यामरको अनुभव र अनुभव सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। यसले अल्पसंख्यक ब्राजीलिया मोम र केहि चीजको बीचमा फरक पार्छ जुन केहि असहज हुन्छ।
मैले कठिन बाटो पत्ता लगाए कि तपाई केवल सैलूनको प्रतिष्ठामा जान सक्नुहुन्न। जे बहनों ब्राजीलियन को 1987 मा न्यूयर्क शहर मा पेश गरे, र सेवा को 'सेक्स र द सिटी' द्वारा '90s' मा लोकप्रिय बनाइयो।
मैले "पहिलो स्थान" मा मेरो पहिलो ब्राजील को कोशिश गर्ने निर्णय गरे, र वहाँ एक नियुक्ति बुक गरे। सम्पूर्ण लेआउट अजीब लाग्यो। उनीहरूको सैलून वेस्टर्न 57 औं शहरमा थिए। मैले हलवेमा एक maitred'स्टेशनमा जाँच गरें। "सैलून" भित्र, विभिन्न मोमबत्ती र तिनीहरूका ग्राहकहरू अस्थायी पर्खालबाट विभाजित भएका थिए जुन लगभग पाँच फिट भयो। यो अफिस स्पेस जस्तो लाग्यो जुन भर्खरै परिवर्तित भयो।
अझ पनि खराब, प्रक्रिया गर्ने व्यक्तिले अंग्रेजी बोल्न सक्दैन। उनी एक पोस्टरमा राखे जसले विभिन्न विकल्पहरू देखाए जस्तै ल्यान्डिंग पट्टी, त्रिकोण र स्फिनक्स (सबै कपाल बन्द)। यो जस्तो देखिन्छ कि सबै कपाल एकै पटक आइपुग्थ्यो र दुखाइ उत्तेजित भयो। म एक हप्ताको लागि चोट लागेको र बिग्रियो।
मैले सोधे कि त्यो मात्र थियो थियो, त्यसैले मेरो केही ब्राजिल थियो केही वर्षसम्म। कथा असाइनमेन्टमा, मैले आफैलाई एक पुरा तरिकाले दुर्लभ स्कर्डेलमा भेटें, जसको कारण पछि स्प्रुस र बन्डको रूपमा पुनर्गठन गरिएको छ र थप स्थानमा विस्तार गरिएको छ।
लाइसेन्स एस्टिटिनिजियन जसले सेवा गरिरहेको थियो त्यहाँ वर्णन गरे कि जे बहसका महिलाले एकै ठाउँमा एकदमै धेरै कपाल छोडे। उनले बाल बालिकाको विकास गरिरहेको दिशा अध्ययन गरेनन्। यो महिलाले सानो मात्रामा बन्द गर्यो, त्यसपछि धीरजी स्थानमा टाँसिएको थियो। म यसलाई कत्तिको दु: ख गरेर चोट लागेको थियो।
र त्यहाँ कुनै चोट लागेको थिएन, कुनै सूजन छैन।
कसरी कुशल ब्राजीली वेक्सर फेला पार्न
त्यसोभए तपाईंले कसरी कसैलाई के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्नुहुन्छ? सबैभन्दा महत्त्वेपूर्ण कुरा यो व्यक्ति छ कि हजुरआमा जानु भएको व्यक्तिको व्यक्तिगत सिफारिश प्राप्त गर्न हो। सैलूनको नाममा मात्र भर पर्दैन। "ब्राजिलका धेरै ब्राजिलका मोमहरूमा जानुहोस्" भनी डैनीली मार्केलिन भन्छन्, जुन दिनको दिन 15 स्क्याक्सले स्किट्सडेल , एरिजोनामा स्लिमर डे स्पामा दिनहुन्छ । "के त्यो व्यस्त छ? यदि तपाईले तपाईलाई व्यस्त हुन सक्नुहुन्न भने।"
सधैँ कुनै स्पामा छोड्नुहोस् र ब्राजिलियन मोमको लागि सोध्नुहोस्। सबैलाई कहीं सुरू गर्नु पर्छ, पछि पनि मानिसहरू जो मालिकहरू हुन्छन्। सबैजना एक सिक्न वक्र छ, र तिनीहरूले सिक्दै गल्ती गर्दछ। तपाईले चाहनु भएको अन्तिम कुरा कसैले हो कि ब्राजीलियन वैक्सहरू प्राय: तपाइँमा अभ्यास गर्दछन्।
स्पा ब्राजिल ब्राजीलियन मोमको समयमा महत्वपूर्ण छ। झन्डै साइन इन एक गंदे कोठा, पहिले नै छिनमा टाँसिएको छ, र फर्श वा पर्खालहरूमा मोम। चिकित्सकलाई नबिर्सनु पर्दैन, कहिलेकाहीँ स्ट्याक्सलाई मोमको क्यानमा डुबेको छ। डबल-डुप्लिकेटको अर्थ उनीहरूले तपाईं मा छडी प्रयोग गर्दै छन्, त्यसपछि यसलाई फ्याँकिएको बरु बढी मोम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले यो देख्नुहुन्छ भने, टेबल माथि जानुहोस् र तुरुन्तै छोड्नुहोस्।
यदि तपाइँ यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहुन्छ भने तपाईंको ब्राजीलियन भिजिङ अनुभवमा तपाईंले धेरै नियन्त्रण गर्नुभएको छ।
तपाईंको ब्राजीलिया मोम पहिले
ब्राजिल मोमलाई चार दिन पहिले, पछि, वा तपाईंको मासिक धर्म चक्रको समयमा प्राप्त गर्नु नछोड्नुहोस्।
ब्राजिलको मोम भन्दा आधे घण्टा जस्तै दुख्ने रिभ्वाइमर जस्तै एस्पिरिन वा इबोप्रोफन लिनुहोस्।
कुनै चीख क्रीम जस्तै तपाईंको ब्राजीली मोम पहिले आधे घण्टा भन्दा दुखाइमा दुख्ने रोगको कष्ट राख्नुहोस्।
तपाईंको ब्राजीलिया मोमको समयमा
तपाईंको इजाजतपत्र एस्टिटिस्टियनले तपाईंको भाषामा संचार गर्न सक्षम हुनुपर्छ, सफाईको बारेमा असीम हुनुहोस्, तपाईंलाई सजिलै राख्नुहोस् र विचार र रणनीति देखाउनुहोस्। डैनीलीले ग्राहकलाई तौलियालाई दिएका छन् जसको पक्षमा उनले काम नगरेको र तिनीहरूलाई अझ सहज महसुस गराउने काम गरेनन्।
उसले सज्जनै मोमको प्रयोग गर्नुपर्दछ र पन्जाहरू लगाउनुपर्छ। डैनीलीले एक मधुमेह मोमको प्रयोग गर्दै सुख्खा चिनीमिल निकासी भिटामिन ई को साथ
तपाईंको एस्टास्टिटिस्किङको कुञ्जीले ठूलो भागमा निर्धारण गर्नेछ जुन ब्राजीलियन कत्तिको दुखद हुन्छ। त्यो एकै ठाउँमा एक क्षेत्र धेरै ठूलो हुँदैन, वा दुई पटक एकैचोटि माथि जानु हुँदैन। उनले तपाईंलाई सोध्न सक्छ कि तपाईंको लेबिया खींचेर छालाको तौल मद्दत गर्न मद्दत गरेर भाग लिनको लागि। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि त्यो राम्रो पुल हुन्छ।
तपाईंको ब्राजीलिया मोम पछि
एप्याक्सको पहिलो दिन वा दुई पछि छालालाई स्फूर्ति गर्न Aquaphor प्रयोग गर्नुहोस्।
ब्राजीली मोम दुई दिन पछि, मासुको सेवनबाट बच्न मद्दतको लागि टेन्ड छाला प्रयोग गर्नुहोस्।
ब्राजिल मोमको दुई दिनपछि सूर्यबाट टाढा रहनु र ट्यांडिङको बेड। छाला यसको सुरक्षा को केहि गुमाएको छ र अधिक संवेदनशील छ।
Gommage के हो?
शरीरको काम र मालिश बीचको भिन्नता
Exfoliation किन महत्त्वपूर्ण छ?
फोटो चेतना के हो?
दक्षिणी क्यालिफोर्निया नक्सा
स्पेनमा प्रसिद्ध बुल चलाउँछ
भारतमा 2018 होली महोत्सवको लागि आवश्यक मार्गदर्शक
वियतनाममा यात्रीहरूका लागि पैसा सुझावहरू
ओलम्पिक प्रायद्वीप ट्रिप प्लानर
सैन एंटोनियोमा सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय
सांता हेर्नका लागि उत्कृष्ट स्थानहरू
अमेरिकी एयरलाइन्समा ओड-साइडयुक्त सामान जाँच गर्ने
कसरी बर्कले केन्द्र, ब्रुकलिन नेट स्टेडियममा जानुहोस्
अब बन्द: डेनवर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तेस्रो वार्षिक बियर गार्डन
शंघाई को इतिहास, तांग वंश को प्राचीन राजधानी